Zvakanakira Kurendesa Wiricheya kana uchifamba
gumo, kuchembera, chirwere kana kurwara kazhinji ndizvo zvikonzero zvikuru nei mumwe munhu angada wiricheya yezvinangwa zvekufamba pakufamba. Kana iwe kana mudikanwi uchave uchifamba munguva pfupi iri kutevera, ungada kufunga nezvekurenda pane kutenga michina yekurapa inodhura.
Kumwe kukuvara ndekwenguva pfupi uye kunongoda wiricheya kwenguva pfupi. Muenzaniso unogona kunge uri mumwe munhu akatyoka asingakwanisi kuisa uremu pa gumo kwenguva yakati. Kutenga wiricheya nekuda kwekufamba mumamiriro ezvinhu akadaro hazvina musoro mune zvemari.
Kurenda Kwechinguva Wheelchair
Kurenda wiricheya mumamiriro echinguvana kazhinji isarudzo ine hungwaru. Kuroja mawiricheya anowanzo kuvharwa nevanopa inishuwarenzi. Kana iwe uchifamba nemotokari, ndege, chitima kana chikepe chechikepe, unofanirwa kuziva kuti mawiricheya, mawiricheya emagetsi uye scooters zvinowanzogarwa pane idzi modhi dzekufambisa.
Izvi zvinoita kuti kutenderera parwendo rwako kuve nyore uye kunakidze.
Vanhu vari pawiricheya novimba vanowanzonzwa zvikuru vasununguka muwiricheya kuti zvavo, asi pane zviitiko apo kurendesa ingava unyatsobatsira pane kuunza dzavo.
Indoor Wheelchairs against Outdoor Wheelchair
Vanhu vazhinji havana mawiricheya anogona kushandiswa munzvimbo iri yose kana mamiriro ese ehupenyu hwavo. Indoor wheelchair yakasiyana neyekunze. Mawiricheya emukati anofanira kunge akareruka uye anogona kufambiswa nepo mawiricheya ekunze achiwanzoremerwa uye anofanira kufambiswa nemota kana mushandisi asingadi kutsamira pane vamwe pakufamba.
Chimwe chiitiko apo kuhaya wiricheya kungabatsira ndekwekufamba sezvo mawiricheya emunhu anogona kazhinji kukuvadzwa nevatambi vemikwende kana nhumbi dzinochinja. Chimwe chikonzero ndechekuti kunyangwe chimwe chinhu chinoshanda mune imwe nyika, chinogona kusashanda mune imwe.
Kuwanika Kwepasi Pose kune Vanoshandisa Wheelchair
Mimwe miitiro inogona kunge iri nyika yakatarwa, semuenzaniso, dzimwe nyika dzine mafuremu madiki uye mawiricheya avo akagadzirwa zvinoenderana. Rimwe dambudziko rakajairika nderekuisa magetsi mawiricheya emagetsi.
Dzimwe nyika dzine mazana maviri nemakumi mairi (volts) ayo asingashande pamawichecha emagetsi eNorth America kunze kwekunge iine yakavakirwa mushanduro. Kana chikamu chikatsemuka, kuchinjisa kune imwe nyika kungave kwakaoma nekuda kwezvikamu zvisingawirirane.
Aya angori mashoma ematambudziko aungasangana nawo paunenge uchienda kunze kwenyika. Naizvozvo kunyangwe iwe wakanyatso gadzikana muwiricheya yako, zvikonzero zviri pamusoro zvinogona kuchinja pfungwa dzako nezve kushandisa wiricheya yekurenda.